Dabley afka u duuban yahay ayaa sidooda kala dhex-baxay tobanaan ruux oo ay guriyahooda kasoo saareen kuna kulmiyeen hal goob.
JOWHAR, HirShabelle – Dowlad goboleedka HirShabelle ayaa sharaxaad horudhac ah ka bixiyey qaabka uu u dhacay dil wadareedka 8-da qof loogu geystay tuulada Golole, duleedka Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Maxamed Cali Caadle, wasiirka arrimaha gudaha maamulkaas, ayaa sheegay in todoba kamid ah ay ahaayeen xirfad-layaal caafimaad, ruuxa kalena uu mehrad ku lahaa nawaaxiga MCH-ka ay ka shaqeynayeen.
Caadle oo u waramay warbaahinta dowlada Puntland ayaa xaqiijiyey in sideedooda lagala dhex-baxay tobanaan ruux oo kooxaha hubeysan ay xaafadahooda kasoo saareen kuna kulmiyeen hal goob.
Tani, sidda ay rumeysan yihiin falanqeeyeyaasha, ayaa macnaheedu yahay in ay ahaayeen dad lasoo far-muuqay ama bartilmaameed toos ah ahaa.
Sidda laga soo xigtay wasiirka, shaqsiyaadka afduubka sameeyay ayaa wejiga soo qarsaday, talaabo u muuqata ay uga hortagayeen in la aqoonsado.
Shalay oo Khamiis ahayd gaar ahaan abaare galabnimadii ayaa meydka sideedooda lasoo dhigay duleedka Gololey, sidda uu shaaciyey wasiirka, oo carabka ku dhuftay in ay baarayaan dhacdadaas.
"Marka arrintaas ciddii ku lugta lahayd baaritaan ayaa socda oo lagu ogaan doonaa," ayuu ka daray, isagoo ka gaabsaday bixinta tafaasiil dheeraad ah.
Gololey waa ka arimiya maamulka HirShabelle, balse ma joogaan ciidamo dowladeed oo awood badan, waana mid kamid ah goobaha ay Al-Shabaab ku qarxiso ciidamadda xoogga iyo mas'uuliyiinta.
Horaantii asbuucaan, qarax miino oo duleedka Gololey lagula eegtay ciidamo milatari ah ayaa sababay dhimashadda ku dhowaad sagaal askari iyo dhaawaca tirro intaas ka badan.
Dhacdadaan ayaa mar kale sarre u qaadeysa walwalka ku aadan in dadka shacabka ay yihiin dhibaneyaasha ugu balaaran ee falal amni darro ee ka dhaca Soomaaliya, oo ay ka dambeeyaan kooxo ka baxsada cadaalada.
Dhalinyaradan oo qaarkood ka shaqeynaya xarun MCH ayaa lagu waramay in shalay laga qafaashay degaankaas.
Askar ka tirsan milatariga Soomaaliya oo qarax miino lagu dilay
Soomaliya 26.05.2020. 22:02